Rio Ferdinand Oo Magacaabay Xiddigga Premier League Ee Ay Liverpool U Baahan Tahay & Booska Uu Ka Ciyaaro - GOOL24.NET
Rio Ferdinand Oo Magacaabay Xiddigga Premier League Ee Ay Liverpool U Baahan Tahay & Booska Uu Ka Ciyaaro
May 18, 2022 Abdiwahab Ahmed
Halyeyga Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa sharraxay sababta ay Liverpool ugu baahan tahay inay la saxeexato ciyaartoy sida xiddiga Chelsea ee N’Golo Kante ah, si ay u noqdaan koox ka dhisan khadka dhexe ee kubbad-burburinta isla markaana aan si fudud loo gaadhi karin difaacooda.
Liverpool ayaa dhowaan Chelsea kaga guuleysatay finalka FA Cup iyadoo rikoodheyaal ku garaacday kaddib markii ciyaar waqti dheeraad ah lagu daray ay goolal la’aan ku dhamaysteen, waxaana geesiga ciyaaartaas noqday Kostas Tsimikas oo dhaliyey goolka guusha.
Rio Ferdinand ayaa sharraxaad ka bixiyey guushii ay Liverpool ku gaadhay Wembley Stadium Sabtidii toddobaadkan iyo sidoo kalae in ay isla garoonkaas bishii February Chelsea ku garaacday rikoodheyaal oo ay ka qaadday Carabao Cup.
Isaga oo ka hadlayay barnaamijka bartiisa YouTube-ka ee Vibe with FIFA, ayuu Rio Ferdinand ku dooday in Liverpool u baahan tahay khad dhexe oo adag oo kubbad-burburinta ah, waxaana uu u tilmaamay xiddiga Chelsea iyo xulka Faransiiska ee N’Golo Kante.
Stephen Howson oo ay barnaamijka wada daadihinayeen Rio Ferdinand ayaa hadalka ku horreeyey, waxaana uu su’aal geliyey sida ay khadka dhexe ee Liverpool cadaadiska u saarayaan ciyaartoyda kooxda kasoo horjeedda, waxaanu yidhi: “Waxa aan dareemayaa in uu ka maqan yahay mishiinkii qolka, amaba ay la’ yihiin sidii ay u awoodi lahaayeen in ay difaaca riixaan amaba ay culays saaraan difaacaa sidii oo ay koox afar difaac ah la ciyaarayaan.
Hadalka Howson kaddib, waxa makarafoonka la wareegay Rio Ferdinand oo yidhi: “Waxay u baahan yihiin Kante.
“Waxay u baahan yihiin tamarta Kante oo caafimaad qaba, haddii ogolaanshaha loo siiyo inuu yimaaddo, dhibaato badan ayuu ku abuuri kari lahaa.”